DEG-DEG:- Shacabka Puntland Oo Quusiyey Isbahaysiga Mucaaradeysan Farmaajo. – Puntland News.net
Home 2018 January 12 Somali News DEG-DEG:- Shacabka Puntland Oo Quusiyey Isbahaysiga Mucaaradeysan Farmaajo.
DEG-DEG:- Shacabka Puntland Oo Quusiyey Isbahaysiga Mucaaradeysan Farmaajo.
Aragtida ka dhalatay booqashada Madaxweynaha Dowladda Fedeaalka Soomaaliya uu ku tegay goboladda Puntland ayaa waxay shaaca ka qaaday sida weyn ee shacabka Soomaaliyeed ee reer Puntland ay u marxabeeyeen Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo.
Tallaabadan ayaa waxay meesha ka saaraysaa gidaar adkaa oo horay u dhex yaalay nidaamka Qaranimada iyo bulshadda Soomaaliyeed, kaasoo ay abuureen kooxo Siyaasiyiin ah oo awood ka dhex sameytay bulshadda dhexdeeda.
Waxaa kaloo Safarka Madaxweyne Farmaajo uu iftiimiyey in aysan jirin cadaawad u dhexeysa beelaha Soomaaliyeed balse taas bedelkeeda ay u jirto baahi aad u weyn oo shacabku ay u qabaan hogaan wanaagsan iyo Qaranimo sharaf leh oo dalka Soomaalliya dib uga soo iftiimta.
Sida aynu ka war hayno wadanka Soomaaliya waxaa xiligan ka jira nidaam Federaaliisim ah oo aan weli tabareysan, isla markaasna ay jirto in ay yar tahay aqoonta nidaamkaas looga gol leeyahay oo aysan Soomaalidu ka dheregsaneyn.
Maamuladda Federaalka oo ah kuwo bulshadda deegaanku ay soo doortaan ayaa badankood waxaa ay Hogaamiyayaasha la doortaa isu arkaan in ay xukumaan Dowlad awood leh oo aysan jirin cid kale oo ay hoos tegi karaan.
Arrimahan waxaan ka dhadhansan karnaa shirkaii Hogaamiyayaasha Goboladda Soomaaliya ay ku midoobeen ee ka dhacay magaalada Kismaayo sanadkii la soo dhaafay, kaasoo ay ka soo baxeen qoraalo fara badan oo tallaabooyin ay Dowladda dhexe qaaday lagu xagal daacinayey, waxaa isbahaysigaas Guddoomiye loogu doortay Maaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas.
Hogaamiyayaasha Goboladda ee doorashada ku koray kursiga maamulka ayaa la arkayey iyagoo go’aamo adag iyo muran siyaasadeed kula taagan Dowladda Dhexe, isla markaasna ku doodaya in ay shacbkooda ka ilaalilanayaan wax walba oo dulmi ku ah.
Hogaamiyayaasha Gobolladda Soomaaliya ayaa qaarkood waxay deris la noqdeen rag Siyaasiyiin qar wareeg ah kuwaasoo u taagan in ay abuuraan hagardaamo loo geysto dowladda dhexe si ay fursad ugu helaan in ay talladda wadanka gacantooda u soo gasho.
Arintu siday doonto ha ahaatee, shacabka Puntland ayaa guryahooda dibadda uga soo baxay markii ay maqleen in Madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ugu imaan doono, waxayna u muuqdeen bulsho sugeysay Dowladnimo iyo hogaan wanaagsan.
“Ma aha in aan Farmaajo jacayl aan u qabno u soo dhoweynayno, laakiin waxaan jecelnahay Qaranimada iyo Soomaalinimada, waxaana dooneynaa in Soomaaliya ay xor ka noqoto dulmiga, jahliga, gaajadda iwm” sidaas waxaa sheegay nin dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay soo dhoweynta Madaxweynaha ee magaalada Waaciye.
Hadddaba, Shacabka Puntland waxay daaha ka rogeen in aysan shirko kula aheyn Isbahaysiga Madaxweynayaasha Goboladda Soomaaliya talaabooyinka ay xiliyada qaarkood kaga hor yimaadaan Dowladda dhexe ee Federaalka Soomaaliya.